ဂျပန်နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဗဟိုဘဏ်၏အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့ ၀၆:၁၅MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအတိုးနှုန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီးပါက ၀၉:၃၀MTအချိန်တွင် ဗဟိုဘဏ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။.
ထိုပွဲနှစ်ခုလုံးကြောင့် ဂျပန်ယန်းကို အတက်အကျဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ငွေဖောင်းပွမှု အားပျော့နေခဲ့တာကြောင့် နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် အတိုးနှုန်းကို မပြောင်းဘဲထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါသည်။ ယခုလပြုလုပ်မည့် ဆွေးနွေးပွဲတွင်လည်း ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းကို အပြောင်းအလဲလုပ်နိုင်ခြေမရှိနိုင်ကြောင်း ဈေးကွက်က ခန့်မှန်းထားကြပါသည်။.
ဂျပန်နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးနှင့် ငွေဖောင်းပွမှုအခြေအနေအပေါ်အကောင်းမြင်ခဲ့ပါက ဂျပန်ယန်းတန်ဖိုးမြင့်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး အကောင်းမြင်မှုနည်းပါက ဂျပန်ယန်းတန်ဖိုးအားပျော့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်။.